Xusuus-qorro iyo Dib-u-eegis ku Iftiiminta Dab-qabad uu qoray Jack London - Ikkaro
Inicio >> Buugaag >> U shid dabshid Jack London
Tarjumaadaha waxay ku saleysan yihiin shaqada ay aasaaseen Jaamacadda Stanford Daabacaadda Canonical ee Sheekooyinka Jack London oo Dhameystiran.
Sannadkii 1907-dii ayuu dib ugu cusboonaysiiyey majaladda Century Magazine sanadkii 1910-kii ayaa lagu soo ururiyey mugga wejiga lumay.
Sawiradan Raul Arias Hore ayaan ugu arkay iyaga oo daabacan guriga daabacaadda ee King Lear oo si adag u furan oo baaxad weyn leh. Waa mug aan ka soo qaatay maktabadda dadweynaha markii ugu horreysay ee aan akhriyo. Taas ka dib waxaan helay nooca Reino de Cordelia ee aan ku dhammeeyay iibsiga.
Si uun waxay ii xasuusiyaan sawirada Agustín Comotto 20.000 oo horyaal oo safarka biyaha hoostiisa ah, Buugga loogu jecel yahay Verne ilaa hadda.
Waa sheeko lagu akhriyo hal fadhi, maalmaha qaboobaha. Waa sheeko aad u qurux badan, oo xamaasad leh taas oo kaa dhigeysa inaad naftaada gasho kabaha halyeeyada isla markaana aad dareento dhibaatadiisa, dhibaatadiisa. Waxay ka tarjumaysaa qallafsanaanta goobahan aan loo dulqaadan karin. Dabeecadda duurka ku jirta iyo sida uu ninku u yar yahay, isla markaana aan isaga difaaci karin.
Nooca 1907 wuxuu u muuqdaa mid iga sarreeya dhinac walba. Inaanay jirin wada hadallo oo aad aragto oo keliya fikradaha halyeeyada ayaa kugu kalifaya inaad sheekada isku mashquusho. Muuqaalka Eyga la socda intuu safarka ku jiray wuxuu iila muuqdaa kheyraad fantastik ah iyo mid maqan marka aad akhrido nooca koowaad.
Waa hab fiican oo loo bilaabo akhriska London. Shaqadani waxay u egtahay mid la mid ah Baaqii duurjoogta y Tusbax cad. Shaqo kale oo uu qoray qoraagu oo aan akhriyay sanado badan ka hor oo aan doonayo inaan qabto ayaa ah Musaafurinta Xiddigaha.
Markuu jiray 21 sano, London wuxuu u safray Alaska si uu dahab u raadsado, wuxuu dareemay oo ku noolaa dhaxanta bangiyada Klondike. Wuxuu ku noolaa qabowga daran qofka ugu horeeya, wuxuu dhex maray kaymahaas khibradahaas oo dhanna waxaa lagu daabacay sheekadan.
Qaar ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee laga soo ururiyey buugga.
Laga soo bilaabo 45ºC oo ka hooseysa eber waa lagama maarmaan in qof lala safro
Waxay isticmaalaan jaangooyo laga sameeyay jilif bjchrk. Waa inaan baaro mowduucan.
Xaqiiqooyin xiiso badan
Heerkulka hawada ee ugu hooseeya ee laga diiwaangeliyo Dhulka saldhigga cimilada ayaa ahaa -89,2ºC. Waxaa lagu duubay Ruushka Bariga Antarctica, saldhigga Vostok (Source National Geographic). Laakiin daraasad 2018 ah oo ku taal Waraaqaha Cilmi-baarista Juqraafiyeed (Heerkulka 'Ultralow Surface Heatures' ee Bariga Antarctica Laga soo bilaabo Khariidaynta Khariidadda Cimilada ee Satellite-ka: Meelaha ugu Qabow Dhulka) saynisyahano falanqeynaya xogta satalaytka waxay arkeen heerkulka -90ºC
4 Xaqiiqooyin xiiso badan